Immisa duufaanno samaysmay 2016? | Saadaasha Shabakadda
Duufaanta Otto oo lagu arkay dayax gacmeed.
Waxay umuuqatay in maalintu aysan imaanaynin, laakiin nasiib wanaag waxkasta way yimaadaan: Xafiiska Saadaasha Hawada ee Qaranka (ONAMET), ee Dominican Republic, wuxuu ku dhammaadaa xilliga duufaanka ee Atlantic. In kasta oo taasi macnaheedu aanu ahayn inaan la samayn karin mar kale maalmaha ama toddobaadyada soo socda, laakiin suurtagalnimada in taasi dhacdo aad bay u yar tahay.
Waxay ahayd waqti duufaanno aad u xoog badan, kuwaas oo waxyeelo weyn u gaystay daadadka iyo dabaylaha xoogan ee ku dhuftay magaalooyin iyo magaalooyin badan oo ka tirsan Ameerika. Aynu dib u eegno duufaannadii sameeyay inta lagu jiro waxa shaki la'aan noqon doona xilli duufaan ah oo ay adag tahay in la iloobo.
1 Duufaantii Alex, intii u dhaxeysay 12-kii ilaa 15-kii bishii koowaad
2 Hurricane Earl, Agoosto 2-6
3 Hurricane Gastón, inta udhaxeysa August 22 iyo September 3
4 Duufaanta Hermine, inta udhaxeysa August 28 iyo September 3
5 Duufaanta Matthew, inta u dhaxeysa Sebtember 28 iyo Oktoobar 10
6 Duufaanta Nicole, intii u dhaxeysay 4tii iyo 18kii Oktoobar
7 Hurricane Otto, inta udhaxeysa Nofeembar 20 iyo 27
Duufaantii Alex, intii u dhaxeysay 12-kii ilaa 15-kii bishii koowaad
Dhammaantood waxay bilaabeen Janaayo, illaa shan bilood ka hor bilowga rasmiga ah ee xilli ciyaareedka. Waxay ahayd duufaantii ugu horreysay tan iyo 1955 ee sameysay bishii koowaad ee sanadka. Markay ahayd Janaayo 14, 2016, Duufaantii Alex ayaa la sameeyay taas oo ku dambaysay saamaynta Jasiiradaha Azores iyo Bermuda oo leh dabaylo gaadhaya 140km / saacaddii, taasi waa, kuwa wata Duufaannada Qeybta 1.
Sabab dhimasho qof gudaha Boortaqiiska.
Hurricane Earl, Agoosto 2-6
Bishii Agoosto, biyaha kulul, duufaan cusub ayaa la sameeyay, oo saameysay Yucatán, Mexico, Puerto Rico iyo Hispaniola. Dabaysheeda ugu badan ee dabayshu waxay gaadhay xawaaraha 140km / saacaddii, sidaas bayna ku noqotay qayb 1 duufaan ah.
Khasaaraha sababay ee lagu qiimeeyay in ka badan $ 100 milyan, iyo waxaa u dhintey 64 dhimasho, 52 kaliya Mexico.
Hurricane Gastón, inta udhaxeysa August 22 iyo September 3
Gastón waxay ahayd duufaantii ugu horaysay ee runtii awood badan xilligaas oo leh dabaylo ilaa 195km / h, sidaasna ku gaadhay qaybta 3 ee miisaanka Saffir-Simpson ee Azores. In kasta oo ay wax waliba jireen, ma jirin wax dhaawac ah ama khasaare ah oo laga qoomamooday.
Duufaanta Hermine, inta udhaxeysa August 28 iyo September 3
Markii uu Gastón kala dareeray, Hermine waxaa laga sameeyay badda Caribbean-ka, duufaan gaartay qeybta 1. Dabeylaha ugu badan ee duufaanta ayaa ka dhacay 130km / saacaddii, oo saameeyay Cuba, Bahamas, Dominican Republic iyo koonfur-galbeed Mareykanka.
Khasaare sababay oo lagu qiimeeyay in ka badan $ 300 milyan, iyo waxaa u dhintey 5 dhimasho gudaha Mareykanka
Duufaanta Matthew, inta u dhaxeysa Sebtember 28 iyo Oktoobar 10
Dabayaaqadii bishii Sebtember iyo badhtamihii Oktoobar ayaa adduunku indhihiisa saaray Badweynta Atlantik. Halkaas, waxaa lagu sameeyay Hurricane Matthew, tii ugu xoogga badneyd xilligaas, oo gaartay qeybta 5 sababo la xiriira dabeylo isdaba joog ah oo socday illaa 260km / h. Waxay saameysay Venezuela, Florida, Cuba, Dominican Republic, Colombia, The Antilles-ka Yar, iyo gaar ahaan Haiti.
Waxay sababtay waxyeelo hantiyeed oo u dhiganta 10.58 bilyan oo doolar, iyo waxaa u dhintey 1710 dhimasho, 1655 kaliya Haiti.
Duufaanta Nicole, intii u dhaxeysay 4tii iyo 18kii Oktoobar
Bishii Oktoobar waa inaan ka hadalnaa Nicole, duufaan Nooca 4 ah oo ka sameysmay Waqooyiga Atlantik ee u dhow Bermuda. Xawaaraha ugu badan ee dabaysha la diiwaan geliyey wuxuu ahaa 215km / saacaddiilaakiin nasiib wanaag, ma jirin wax dhaawac ama lumis ah oo aan ka qoomameyno.
Hurricane Otto, inta udhaxeysa Nofeembar 20 iyo 27
Dhamaadka Dhamaadka Nofeembar Otto waxaa laga sameeyay Bartamaha Ameerika. Iyada oo dabaylo gaaraya ilaa 180km / saacaddii ay gaareen qeybta 3, oo ay saameeyeen Colombia, Panama, Costa Rica iyo Nicaragua.
Khasaare hantiyadeed oo lagu qiimeeyay in ka badan $ 8 milyan, iyo waxaa u dhintey 17 dhimasho.
Sidaa darteed, wadar ahaan 7 duufaanno ayaa sameeyay sanadkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Immisa duufaanno samaysmay 2016?